China 3-Amino-1, 2, 4-triazole-5-carboxylic acid fekitori nevatengesi | Hailun Nyowani Zvinyorwa
Chigadzirwa zita:5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid; 3-AMino-
Molecular Kurema: 128.09
Shandisa:Mishonga, mishonga yekuuraya zvipuka, dhayi mapindiro, semuenzaniso, wepakati ribavirin
Muchena kana wachena chena crystalline upfu
Iye zvino tava nemidziyo yakakura kwazvo. Zvinhu zvedu zvinotumirwa kuenda kuUSA, UK uye zvichingodaro, kunakidzwa nemukurumbira mukuru pakati pevatengi veFekitori Kutengesa China 3-Amino-1,2,4-Triazole-5-Carboxylic Acid yeMachira, Tinogamuchira noushamwari vese vashamisika vatengi kutaura nesu kuti uwane rumwe ruzivo uye chokwadi.
Factory Kutengesa China 3-Amino-1,2,4-Triazole-5-Carboxylic Acid, Yedu pro engineering timu inowanzo kuve yakagadzirira kukushandira iwe kuti ubvunze uye nekupa mhinduro. Isu tiri kukwanisa zvakare kukupa iwe mahara emahara sampuli kuti uwane zvaunoda. Kuyedza kwakanyanya kungangogadzirwa kukupa iwe sevhisi yepamusoro uye zvigadzirwa. Paunenge uchida bhizinesi redu uye zvigadzirwa nemhinduro, ndapota taura nesu nekutitumira maemail kana kufona isu nekukurumidza. Mukuyedza kuziva mhinduro dzedu uye nekambani yekuwedzera, unogona kuuya kufekitori kwedu kuti uione. Tiri kuenda kunogamuchira vaenzi vanobva kumativi ese epasi kune bhizinesi redu kuti vagadzire hukama hwebhizinesi nesu. Ita shuwa kuti unonzwa usina mutengo-wekutaura nesu kune bhizinesi diki uye isu tinotenda isu tichagovana yakanakisa yekutengesa ruzivo nevatengesi vedu vese.
Tave nenhamba zhinji dzevashandi dzakakura pakushambadzira, QC, uye tichishanda nemhando dzematambudziko anonetsa kubva munzira yekusika yekutengesa Hot China Mutengesi 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid, Gamuchirai mose vatengi vakanaka vanotaurirana ruzivo rwemhinduro uye mazano nesu !!
isu tinokupa iwe nezvimwe zvakakosha zvigadzirwa uye mhinduro nemasevhisi, uye zvakare topa mupiro mukusimudzira kwemakemikari indasitiri kumba nekune dzimwe nyika. Vashambadzi vese vekumba nevekunze vanogamuchirwa nesimba kuti vabatane nesu kuti tikure pamwe chete.
Pashure: 3-Amino-1, 2, 4-Triazole
Zvadaro: 3-Amino-5-mercapto-1, 2, 4-katatu